ကဒ် V ကို. STRATTON OAKMONT, INC ။: အနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့်မင်နီဆိုတာ၏အထောက်အထား U.S ခရိုင်တရားရုံး၏စည်းကမ်းများ (1996)
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း / ကဒ် V ကို. STRATTON OAKMONT, INC ။: အနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့်မင်နီဆိုတာ၏အထောက်အထား U.S ခရိုင်တရားရုံး၏စည်းကမ်းများ (1996)
Card အားး. Stratton Oakmont စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုယူဆောင်ကာခုံသမာဓိဆုပြန်အပ်ရန်အဆိုကို, အချင်းချင်း Alia, အဆိုပါခုံသမာဓိခုံရုံးသက်သေအထောက်အထားများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သောမြေပြင်ပေါ်တွင်.
စက်တင်ဘာလထဲမှာ 1994, တောင်းဆိုသူ Securities မှကားအရောင်းအက်ဥပဒေအမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအညီခုံသမာဓိများအတွက်တင်သွင်းခဲ့ (NASD) Stratton Oakmont ဆန့်ကျင်, ဘုံဥပဒလိမ်လည်မှုဟုဆိုကာ, ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တာဝန်ချိုးဖောက်, ဂရုမစိုက်ခြင်း, Rico ချိုးဖောက်မှုများ, ထိုကဲ့သို့သောကုန်သွယ်အဖြစ်ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်ချိုးဖောက်မှုများ, လည်းပြစ်ဒဏ်ခတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတောင်းဆို. အဆိုပါပါတီများအနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ NASD Code ကိုနှင့်အညီအနုညာတစီရင်ဖို့ဟာသူတို့ရဲ့အငြင်းပွားမှုတင်ပြရန်သဘောတူတဲ့ Uniform တင်ပြမှုကိုသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော်လည်း. အနုညာတခုံရုံးအတွက်တောင်းဆိုသူကိုအမေရိကန် $ ချီးမြှင့်ခဲ့ 1,552,200.86 Stratton Oakmont ဆန့်ကျင်အစားထိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်.
Stratton Oakmont အနုညာတခုံရုံးကြားနာရက်စွဲများရွှေ့ဆိုင်းရန်ငြင်းဆန်အတွက်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများအပြစ်ရှိခဲ့ပါကဆုချီးမြှင့်ထုတ်ပေးရန်အတွက်ပညတ်တရား၏အရေးမစိုက်အတွက်သရုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် U.S.C အောက်တွင်၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုကျော်လွန်ခဲ့ကွောငျးမြေပြင်ပေါ်တွင်ခုံသမာဓိဆုစိန်ခေါ်.
အဆိုပါတောင်းဆိုသူပုခုံသမာဓိအတွက်ဖြေဆိုသူဆန့်ကျင် SEC အားဖြင့်တင်သွင်းအကြိုနှင့်အမြဲတမ်းတရားရုံးမိန့်တစ်ခုလူထုအခြေပြုတိုင်ကြားစာရည်ညွှန်းခဲ့သည်. ဖြေဆိုသူဟာ SEC ၏တိုင်ကြားချက်အထောက်အထားများ၏ဖက်ဒရယ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီခုံသမာဓိရှေ့ဆက်ထံမှလှုပ်ခတ်ခဲ့သင့်ကြောင်းစောဒကတက်.
တရားရုံး, ပုဒ်မအောက်မှာ 10 ဖက်ဒရယ်အနုညာတစီရင်အက်ဥပဒေ, ပညတ်တရား၏မန်နီးဖက်စ်သည်အရေးမစိုက်သကျသပွေဖို့လုံလောက်တဲ့သက်သေအထောက်အထားမျှမတွေ့ရှိခဲ့.
အဆိုပါတရားရုံးအထောက်အထားများကိစ္စကိုဆန်းစစ်နှင့်ပါတီများအကြားသို့ ဝင်. ယင်းတင်ပြမှုသဘောတူညီချက်ဟာ NASD နှင့်အညီဆက်လက်သတိပြု, နှင့်ပုဒ်မ 34 အဆိုပါ NASD ၏ပေးပါသည် "[t ကို]သူကခုံသမာဓိ proffered မဆိုသက်သေအထောက်အထားများ၏ပစ္စည်းနှင့်ဆီလျော်မှုဆုံးဖြတ်ရန်ရကြလိမ့်မည်နှင့်သက်သေအထောက်အထားများခွင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်လိမ့်မည်မဟုတ်". ဒါဟာအစကြောင့်ပုဒ်မမှတ်ချက်ပြု 35 အဆိုပါ NASD ၏ပေးပါသည် "[t ကို]သူကခုံသမာဓိဒီ Code ကိုအောက်မှာအားလုံးပြဌာန်းချက်၏လျှောက်လွှာအနက်ကိုဘော်ပြခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်အာဏာအပ်နှင်းခံရကြလိမ့်မည်နှင့်ခုံသမာဓိအားဖြင့်မည်သည့်အာဏာရနှင့်အတူလိုက်နာမှုရရှိရန်သင့်လျော်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုလုပ်". ဤရွေ့ကားကဏ္ဍများ, တရားရုံးအညီ, အဆိုပါခုံသမာဓိခုံရုံးသက်သေအထောက်အထားများ၏တရားစီရင်ရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အခွင့်အာဏာရှိခဲ့နှင့် Panel ကိုအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသက်သေအထောက်အထားများကိုလက်မခံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဗိုလ်လုပွဲနှင့် binding ခဲ့ကွောငျးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်.
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်